Momba ny EISEN - INDIAFIA SHENZHEN EISEN voafetra
EISEN INDUSTRY LIMITED (KUANGYE DONGGUAN TECHNOLOGY CO., LTD) dia miorina ao amin'ny Village Lianhu, Tangxia Town, Tanànan'i Dongguan miaraka amina fitaterana mety tsara, miaraka amin'ny velaran'ny fananganana mihoatra ny 5,000 metatra toradroa.
Amin'izao fotoana izao, ny fitaovana mekanika an'ny orinasa dia ahitana: tsipika fivoriambe 10 mandeha ho azy, mihoatra ny 40 saron-tava ara-pitsaboana azo ampiasaina & KN95 FFP2 andalana famokarana mandeha ho azy, laboratoara elektrika iray feno,
ary ny fananganana antoko fahatelo voamarina 100, Atrikasa tsy misy vovoka amin'ny ambaratonga 000, Laboratoara fitsaboana ambaratonga 10.000, sns.. Fahafahan'ny famokarana matanjaka sy ekipa mpiasa voaofana tsara. Tamin'ny martsa 2020, ny orinasa
nandalo ny Fitsaboana ISO13485 & GMP fanamarinana rafitra kalitaon'ny fitaovana, ary tamin'ny Mey 2020 dia nahazo ny fahazoan-dàlana hamokarana fitaovana fitsaboana nasionaly Class II, ary ny vokatra nandalo ny fanamarinana ny anatiny sy iraisam-pirenena
andrim-panjakana matihanina. EISEN INDUSTRY LIMITED dia mitohy manantanteraka fanavaozana ara-teknolojia ary mampitombo ny fanavaozana ny rafitra kalitao, mametraka fototra mafy orina hanatanterahana ny vinan'ny orinasanay. Avelao ny tsirairay hankafy ny fahasalamana sy ny hatsaran-tarehy!
Mba hiantohana ny fiarovana sy ny kalitaon'ny vokatra avy amin'ny loharano dia nisafidy tsara ny indostria izahay'mpamatsy fitaovana tsara indrindra ho an'ny fiaraha-miasa maharitra sy fifanarahana mpivarotra vita sonia sy marina miaraka amin'ny mpiasan'ny 20 mahery.
Nandray anjara tamin'ny fampirantiana maro tany Shina izahay, ary ny mpivarotra avy any Shina dia liana fatratra amin'ny vokatray.
Tomban-kevitry ny mpividy
Ny orinasan-tsika rehetra dia mandray ny atrikasa tsy misy vovoka, aorian'ny departemantan'ny fiarovana nasionaly ho fanaraha-maso, na milina, fitaovana na mpiasa isan'andro dia manao asa tsara, famonoana otrikaina tsara ary mitazona fahasalamana mangina, satria ny antsipiriany rehetra momba ny loharano loharano, izahay fanjifana fiarovana tanteraka, manao asa tsara isaky ny rohy amin'ny docking, miaraka amin'ny fanamafisana ny vokatra sy ny index index core fiarovana rehetra ny mpiasa.
Ny orinasa dia miatrika ny antsipiriany rehetra amin'ny asa miaraka amina toetra sy fomba feno fankasitrahana. Mandritra izany fotoana izany, ny vokatra voalohany dia miaraka amin'ny fiahiantsika ny toe-javatra misy ny valanaretina sy ny vavaka ho an'ny vahaolana aloha.
Karazan'orinasa ------ Mpanamboatra
Firenena / Faritra --- Guangdong, Sina
Vokatra lehibe --- Saron-tava fitsaboana tsy azo ampiasaina (Non-Aseptic), Saron-tava azo ampiasaina, saron-tava KN95, Saron-tava FFP2, Saron-tava fiarovana, fitsaboana tsy azo ifandraisana
Tompona ------ Tompona tsy miankina
Mpiasa manontolo --- 101 - Olona 200
Ny vola miditra isan-taona --- tsiambaratelo
Taona napetraka --- 2019
Tsena lehibe --- Afrika 35,00%
Eoropa Andrefana 25,00%
Amerika Avaratra 22,00%
Firenena / Faritra iasan'ny orinasa Efitra 501 Tranobe 1, No.1 Dong Yuan Wu Lu Rod, Lianhu, Tengxie TownDngguan Cry, Guangdong ProinceChine
Laharana famokarana Ambony 10
ContractManufacturing OEM Service OfferedDesign Service OfferedBuyer Label Atolotra
Tombam-bidy fanao isan-taona Ambony USS100 Mllion
ProductName ProductionLineCepecity ActualUnitsProduced (PreviousYear) Verified
Aseptic) 2000000Units / Volana 20000000Units √
DisposableFaceMask 2000000Units / Volana 10000000Units √
KN95PublicMask 500000Units / Volana 3000000Units √
MedicalProtectiveMask 500000Units / Volana 3000000Units √
Non-ContactInfraredThermometer 100000Units / Volana 1000000Units √